Tatitry ny Banky iraisam-pirenena: nitombo 1,4 tapitrisa ny Malagasy latsaka anaty fahantrana | NewsMada
Tatitry ny Banky iraisam-pirenena: nitombo 1,4 tapitrisa ny Malagasy latsaka anaty fahantrana
Nampitotongana ny toekarena eto Madagasikara ny valanaretina Covid-19, araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena (BM), nampitsahatra ny ady amin’ny fahantrana efa hita soritra tany aloha. Vao mainka mitombo isa ny Malagasy mahantra.
Manambara ny BM fa nitombo 1,4 tapitrisa ny Malagasy latsaka lalina anaty fahantrana tamin’ny taona 2020. Maro anisa ny vahoaka anatin’ny fahantrana, hita any ambanivohitra, indrindra an-tanàn-dehibe. Very asa ny ankamaroan’ny mponina, tsy manana fidiram-bola ka lasa any amin’ny varotra tsy ara-dalàna ny betsaka. Sakana amin’ny fampiasam-bola ny valanaretina, na koa mampihisatra na mampikatso ny fihariana sasany.
Matiantoka ny ankamaroan’ny seha-pihariana, « koa raha tsy misy ny laminasa matotra hiatrehana izany, hahazo vahana hatrany ny sehatra tsy ara-dalàna, tsy hisy ny fivoarana eo amin’ny fambolena sy ny fiompiana, tsy hita ny fanajariana ny fotodrafitrasa », hoy ny ao amin’ny BM, misahana an’i Madagasikara.
Nampahalala ny BM fa ny krizy eo amin’ny fifanakalozana eran-tany sy ny fihibohana, nampihena ny harinkarena faobe (PIB) 4,2 % tamin’ny 2020, mitovy noho ny krizy politika tamin’ny 2009. Ny korontana eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fitaterana, ohatra, misy voka-dratsiny eo amin’ny fihariana ankapobeny. Mihena ny vola tokony hiditra avy amin’ny fanondranana entana, ary na misy aza izay fanondranana entana, mbola tsy foana tanteraka ny kolikoly, tsy miverina ny vola vahiny.
Fizahantany, harena an-kibon’ny tany
Anisan’ny sehatra voadona mafy noho ny Covid-19, ny fizahantany, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Tsy tambo isaina ny very asa amin’ireo sehatra ireo, ary tsy mampidi-bola vahiny sy hetra ho an’ny fanjakana. 97 % ny orinasa manamarina ny fahavoazana miantraika amin’izy ireo, ary 64 % amin’ny isan-tokantrano very fidiram-bola hatramin’ny nisian’ny valanaretina.
Maika ny fanarenana izany, araka ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena. Mila mazava ny laminasa fanarenana ny toekarena eto Madagasikara, araka ny tatitra farany navoakan’ny Banky iraisam-pirenena. «Laharam-pahamehana ny fanavaozana ho fanarenana ny toekarena », hoy ihany ny ao amin’ny BM.